तरलताको सकस कमजोर अर्थव्यवस्थाको सूचक | गृहपृष्ठ
Home लेख | दृष्टिकोण तरलताको सकस कमजोर अर्थव्यवस्थाको सूचक
लेख | दृष्टिकोण 109 views
तरलताको सकस कमजोर अर्थव्यवस्थाको सूचक
अहिले तरलता अभावको विषयमा बहस बाक्लिएका छन् । अधिकांश यस्ता छलफल समस्याको अल्पकालीन समाधानमा बढी केन्द्रित भएको पाइएको छ । तरलताको अभाव के हो ? र, यो बढ्नुका कारण केके हुन् ? यसमा गहिरिएर विवेचना हुन पाएको छैन । अहिलेसम्म कहाँबाट पैसा ल्याएर तत्कालका निम्ति गाँठो फुकाउने भन्ने कुरामात्र सुनिएको छ । यो आफैमा पूर्ण बहस सावित हुन सक्दैन ।
तरलताको धरातल :
तरलता र मुद्रास्फीतिबीच निकट अन्तरसम्बन्ध हुन्छ । नेपालको मुद्रास्फीति भारतको मुद्रास्फीतिसँग जोडिएको मानिन्छ । भारतले कुनै बेला ८ प्रतिशतसम्म पुगेको आफ्नो मुद्रास्फीतिलाई अहिले नियन्त्रणमा लिएको छ । त्यहाँ वित्तीय अनुशासनका उपाय अपनाएर अहिले ४ प्रतिशतको मूल्यवृद्धि छ । तर, हामीकहाँ चालू वर्षको बजेटअगाडि आएको मौद्रिक नीतिले ७ प्रतिशत मूल्यवृद्धिको प्रक्षेपण गरेको थियो । अर्कातिर, विगत ४/५ वर्षदेखि नेपालको औसत आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशतमात्र छ । रेमिट्यान्स ( विप्रेषण)को आयलाई अलग गर्ने हो भने ३ प्रतिशतमा झर्न जान्छ । बजेटको आकार भने दोब्बर भइसकेको छ । यसले कि बजेट नै बनावटी हो भन्ने देखाउँछ, होइन भने त्यो रकम सरकारी निकायबाटै अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भइरहेको हुन सक्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बजारमा लक्षित आर्थिक अभिवृद्धिका निम्ति आवश्यकताभन्दा अधिक तरलता छ भन्ने बुझेको हुनुपर्छ । यस्तो अधिक तरलताबाट अर्थतन्त्रले फाइदा लिन सकेको छैन । ९० प्रतिशत आय उपभोगमा खर्च भइरहेको छ । उत्पादनको सट्टा उपभोग बढ्दा मूल्यवृद्धिलाई बल पुगेको छ । मूल चासो अनुत्पादक क्षेत्रमा गइरहेको रकमलाई उत्पादनमा कसरी ल्याउने भन्ने हो । राष्ट्र बैङ्कका अधिकारीहरूका अभिव्यक्तिमा यो कुराको स्वीकारोक्ति देखिन्छ । सरकारले पनि यो तथ्यलाई राम्ररी बुझेको छ ।
राष्ट्र बैङ्कको स्वायत्तता :
एउटा सामान्य व्यापारीले त आफ्नो व्यापारमा तरलताको अभाव बुझेको हुन्छ भने देशमा ४/५ वर्षदेखि सरकार र सरोकारका निकाय यसमा बेखबर हुँदैनन् । यसमा राष्ट्र बैङ्क किन केही गर्दैन ? यसबाट राष्ट्र बैङ्क स्वायत्त छैन भन्ने अर्थ लाग्छ । यो निकाय सरकारबाट निर्देशित छ । यही समयान्तरमा देशमा सरकार फेरबदल पनि पर्याप्तै भएका छन् । राजनीतिमा सत्तामा आउने दबाब र यस निम्ति प्रभावका उद्देश्यले अनुत्पादनक खर्च बढाउँछ । अब थप पैसा बजारमा आएमा मुद्रास्फीतिमा थप चाप पर्ने राष्ट्र बैङ्कले बुझेको छ । यसैले उसले यसलाई दीर्घकालीन समस्या भन्दै आएको छ । विदेशबाट पैसा ल्याएर समाधान गर्ने भनिएको छ । तर, विदेशीले रकम दिने आधार के छन् ? उनीहरूले पनि यहाँका सूचकलाई हेरेरमा पैसा दिने हुन् । आजसम्म नेपालले आफ्नो क्रेडिट रेटिङ गराउन नसक्नुको पछाडि यही डरले काम गरेको हुन सक्छ । ब्याजदरको अन्तरमात्र पैसा ल्याउने पर्याप्त आधार बन्न सक्दैन । आएको पैसा निश्चित समयपछि फिर्ता लैजान सक्ने ग्यारेण्टी चाहिन्छ । अर्कातिर यस्तो पैसामा उसका अनेक शर्त हुन सक्छन् ।
तरलताको माग विश्लेषण :
तरलता अभाव भनेर अहिले वाणिज्य बैङ्कहरूले ब्याजदर १४/१५ प्रतिशतसम्म पुर्‍याएका छन् । बैङ्कले नै १२ प्रतिशतमा लिएका छन् । यस्तोमा लगानी कसरी हुन्छ ? लगानी स्थिर पूँजीमा जाने हो । दीर्घकालीन लगानी यसबाट कुनै पनि हालतमा लाभान्वित हुन सक्दैन । चर्को ब्याजदरको लगानी अल्पकालीनमा मात्र हुन सक्छ । उद्योगले चालू पूँजी लिएको छ भने त्यो बाध्यता हो । यो बाध्यता विस्तार हुँदै गएमा जोखीम बढ्छ । बैङ्कले दिएको ऋण समयमा फिर्ता नआएर त्यसैलाई चलाउन चर्को ब्याजमा पैसा लिएको हुन सक्छ । बढी ब्याजको पैसा चाँडो करोबार हुने जग्गा र शेयर मार्केटजस्ता क्षेत्रमा जान सक्छ । जग्गाको बढ्दो मूल्यले पनि यसलाई पुष्टि गर्छ । पैसाको मागका भित्री कारणलाई उचित तरीकाले केलाउने काम भएको छैन । मागको सापेक्ष विवेचना र व्यवस्थापन हुनुपर्छ । उत्पादनशील क्षेत्रतिर पैसा लैजाने योजना बनाइनुपर्छ । हामीकहाँ ४ देखि ५ प्रतिशतसम्मको मुद्रास्फीति र ७/८ प्रतिशतसम्मको ब्याजदरलाई कसरी कायम राख्न सकिन्छ भन्नेमा स्पष्ट योजनाको खाँचो छ । यसलाई आगामी बजेटले परिलक्षित गर्न सकोस् ।
रियल इस्टेटको यथार्थ :
सरकार रियल इस्टेट क्षेत्रलाई अनुत्पादक मान्छ । तर, यसका आयामलाई उत्पादनसित जोड्ने उपायमा कुनै योजना नै बन्न सकेन । यो क्षेत्रसँग फलाम र सिमेण्ट उद्योग, रोजगारीलगाय उत्पादनमूलक क्षेत्र जोडिएको तथ्यलाई बेवास्ता गरिनु हुँदैन । यसको व्यवस्थापन गर्न नजान्दा यो अनुत्पादकजस्तो देएिको मात्र हो । उदाहरणका लागि टेलिफोन सेवाप्रदायकलाई नै लिऊँ, सीमित प्रतिस्पर्धाले सेवा र गुणस्तरमा सुधार आएको छ । तर, धेरै कम्पनी भएको भए कम्पनी नै डुब्ने अवस्था हुने थियो । कुनै पनि वस्तु र सेवाको आवश्यकताभन्दा बढी आपूर्ति बर्बादीको कारण बन्छ । रियल इस्टेटमा यही भयो । सबै काठमाडौं केन्द्रित भए । यसलाई उत्पादनसित जोड्ने कामै भएन, एक प्रकारले छाडा छोडियो । उचित नियमन गर्ने काममात्र भएको भए राम्रो सम्भाव्यता थियो । आज पनि उपत्यकाबाहिरका वीरगञ्ज, विराटनगर, पोखरा, धनगढी, महेन्द्रनरजस्ता शहरमा यसको सम्भावना नभएको होइन । काठमाडौं नै केन्द्र हो भन्ने मनोविज्ञानले अवरोध पुर्‍याएको हो, यो क्षेत्र आफैमा अनुत्पादक होइन । यस्तोमा राज्यले उचित दिशानिर्देश गर्न सक्नुपर्छ । अझै पनि सम्भावना समाप्त भइसकेको छैन ।
योजनाको कार्यान्वयन :
हामीकहाँ अधिकांश ठूला योजना १०/२० वर्षसम्म पूरा हुँदैनन् । यसमा चाहिनेजति पैसा दिइँदैन । यसलाई चलाइराख्नका लागि लगानी बढाउँदै जाँदा लागत दोब्बर भएका उदाहरण अनेक छन् । बजेटको विनियोजन दोषमुक्त छैन । सम्भाव्यताभन्दा राजनीतिक आग्रह हावी हुँदा समस्या भएको छ । यस्ता योजनामा पैसा फँस्दा उत्पादनशील क्षेत्रमा अभाव सृजना भएको छ । त्यसकारण राजनीतिक आग्रहका आधारभन्दा पनि आवश्यकता र सम्भाव्यताका आधारमा योजना छनोट गरी चाहिँदो पैसा दिन सक्नुपर्छ ।
भ्रष्टाचारका आयाम :
भ्रष्टाचार नियन्त्रणबाहिर छ । भ्रष्टाचार भनेको सरकारी पैसा व्यक्तिको हातमा जाने हो । यस्तो रकम लक्षित उत्पादनमूलक क्षेत्रमा नगएर वैयक्तिक लाभमा खर्च हुन्छ । भ्रष्टाचार पनि लगानीयोग्य पूँजी अभावको कारण हो । अर्कातिर आमजनताको बचत घटेको छ । आयको उचित वितरण भइरहेको छैन । सीमित बचत पनि फाइनान्स, सहकारी र लघुवित्तहरूमा गएको छ । ठूला बैङ्कले पैसावालालाई लक्षित गरेका छन् । अर्थतन्त्रको लागत उच्च भइरहेको छ । जनताको बचत नै राष्ट्रको पूँजी भएकाले यसको अभिवृद्धि र उचित उपायोगिताको उपायमा जोड दिनुपर्छ ।
निकासका उपाय :
तरलताको आपूर्तिभन्दा मागको व्यवस्थापन महŒवपूर्ण कुरा हो । आवश्यकताको विश्लेषण गरी कुन क्षेत्रमा परिचालन गर्ने भन्ने स्पष्ट योजना र कार्यान्वयन जरुरी छ । अर्थतन्त्रलाई उचाइमा पु¥याउने क्षेत्रमा लगानीलाई प्रोत्साहनको खाँचो छ । उद्योग, पर्यटन, कृषि, सडकलगायत अन्य पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ । सरकार र निजीक्षेत्र दुवैले यसमा काम गर्न सक्छन् । उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानीका लागि मितव्ययितालाई बढावा दिइनुपर्छ । अनावश्यक खर्च सङ्कुचन भए उत्पादनमा जान्छ । यसमा सरकारको उचित ध्यान जान सकेको छैन । बैङ्कहरूको लगानीमा नियमन जरुरी छ । कति उत्पादनका क्षेत्रमा गएको छ, कति अनुत्पादकमा छ भन्ने उचित निगरानी आवश्यक छ । परिमाणात्मक भन्दा परिणात्मक लगानीमा जोड दिनुपर्छ । सरकारी खर्चको औचित्य पनि केलाइनुपर्छ । वित्तीय अनुशासन र यसका दायरालाई फराकिलो तुल्याउनु अपरिहार्य छ । लगानीयोग्य पूँजीको अल्पकालीन समाधानमात्र निकास होइन, दीर्घकालीन उपायलाई समानान्तर रूपमा बढाएमात्र निकासको बाटो सहज हुनेछ । सरकारको खर्च प्रक्रियालाई अनुशासनको दायरामा ल्याउनु अनिवार्य छ । कमजोरीलाई कार्पेटमुनि लुकाएर समस्याको निकास सम्भव हुँदैन ।
अग्रवाल निम्बस समूहका अध्यक्ष हुन् ।
निवृत्तिभरण व्यवस्थापन विकल्प र राष्ट्रिय बचत
११ बैशाख २०७५, मंगलवार ०५:५५
सामाजिक आलोचनामा शिक्षाक्षेत्र
११ बैशाख २०७५, मंगलवार ०५:५१
धितोपत्र बोर्डको सेमिअनलाइन
१० बैशाख २०७५, सोमबार ०५:५६
पर्यटनका लागि हामी के गर्न सक्छौं ?
१० बैशाख २०७५, सोमबार ०५:५४